Waxaan rabaa in aan dibadda ku iibiyo! 6 waddan oo ganacsi faa'iido leh
Shiinaha, mid ka mid ah iibsadaha ugu muhiimsan ee Ruushka: mugga alaabta la dhoofiyo ayaa sii kordhaya Shiinaha / Xarunta Dhoofinta Ruushka sanad kasta. Waxaad macaamiishaada ka heli kartaa labadaba internetka ee suuqyada, iyo si toos ah, oo muujinaya alaabta bandhigyada. Waxaa muhiim ah in la tixgeliyo in Shiinaha laftiisa uu soo saaro alaabo aad u badan, oo ay weheliso alaabooyinka dalal badan. Sidaa darteed, marka hore waxaad u baahan tahay inaad falanqeyso baahida oo aad fahanto waxa ay dadka deegaanku jecel yihiin.
Mid ka mid ah fursadaha Qiimaynta rajada wadamada dhoofinta / Xarunta Dhoofinta Ruushka, alaabada dhismaha beeraha-warshadaha (agro-warshadaha), gaar ahaan cuntada, tusaale ahaan, macmacaanka, malab, jalaatada. Labada badeecadood ee diyaarsan iyo alaabta ceeriin ee cuntada ayaa caan ku ah Shiinaha. Iyo sidoo kale qaar ka mid ah alaabooyinka sida caadiga ah lagu tuuro Ruushka ama aan la qiimeyn, oo ay ku jiraan lugaha digaaga. China waxay iibsatay lugaha digaaga iyo madaxyada Crimea sanad ka hor / Rossiyskaya Gazeta.
Sidoo kale, meelaha rajo-gelinta ah ee ganacsiga Shiinaha waxay noqon karaan alwaax alwaax ah, naxaas, bacrimiyeyaasha, qalabka dhismaha iyo kiimikooyinka guriga.
Farshaxanka: Jane Peimer / Shutterstock
Kazakhstan waxa ay iibsataa Waa maxay iyo cidda ay Kazakhstan ka soo iibsataa: top-10 badeecooyinka ajnabiga ah ee ugu baahida badan / Hogaamiyaha Ruushka cuntooyinka, waxyaalaha la isku qurxiyo, taayirada iyo taayirada, dharka, baabuurta, daawooyinka, alaabta guriga iyo wax ka badan. Waddankeena waxaa loo tixgeliyaa Top-10 la-hawlgalayaasha ganacsiga ugu weyn ee Kazakhstan / Inbusiness.kz ganacsiga ugu weyn ee Kazakhstan. Sidaa darteed, ma adkaan doonto inaad suuqa gasho oo aad hesho iibsadahaaga.
Intaa waxaa dheer, Kazakhstan waa xubin ka mid ah ururka EAEU ee kastamka, sidaas darteed waxaa suurtagal ah in la dhoofiyo si degdeg ah oo ka jaban dalalka kale. Gaadiidka badeecooyinka badankooda ee Ururka kuma xidhna cashuuraha kastamka, iyo in la habeeyo Sidee lagu dhawaaqaa kastamka marka loo dhoofinayo dalalka xubnaha ka ah EEU? / Xarunta Dhoofinta ee Ruushka uma baahna caddaynta kastamka. Ka dib dhoofinta alaabada, waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la buuxiyo oo loo gudbiyo maamulka kastamka kaliya foomka diiwaangelinta tirakoobka. Si kastaba ha ahaatee, badeecadaha qaarkood waa inay gudbaan nadaafadda, caafimaadka xoolaha iyo noocyada kale ee xakamaynta, xeerarkan had iyo jeer way khuseeyaan.
Belarus sidoo kale waa xubin ka mid ah ururka kastamka EAEU, markaa shuruudaha keenista alaabada waxay la mid yihiin Kazakhstan. Waxyaabaha kale ee la mid ah dalalkan ayaa ah in Ruushku yahay lammaanahooda ganacsiga ugu weyn: 50% dhammaan alaabooyinka loo dhoofiyo Belarus waxay ka yimaadaan Ruushka.
Warshadaha culus ayaa aasaas u ah dhoofinta. Laakiin dalka gudihiisa, alaabada qaybaha kale ayaa sidoo kale loo baahan yahay, gaar ahaan, alaabta kiimikada, alaabta guriga, alaabta beeraha. Tusaale ahaan, sanadka 2020, dhoofinta kalluunka barafaysan, quudinta xoolaha iyo, si la yaab leh, baradhada karsan ayaa koray. Korodhka saadka ilaa 45% ayaa sidoo kale lagu arkay polyetylen.
Laakiin warshadeeyayaasha Belarusiya ayaa si fiican u shaqeynaya qurxinta miisaaniyada iyo qurxinta qurxinta. Si kastaba ha ahaatee, weli waxaa jira fursad ah in lagu guuleysto dhoofinta alaabta la isku qurxiyo ee Ruushka ayaa kor u kacday ku dhawaad ​​50% / RBC: waxaad ku sharad kartaa qaabab gaar ah ama qaybo aan laga helin dalka laftiisa.
Sawirka: monticello / Shutterstock
Hadda Uzbekistan waxay ku jirtaa Dhoofinta Uzbekistan / Xarunta Dhoofinta Ruushka 12aad ee dhoofinta tamarta aan tamarta ahayn ee Ruushka. Laakiin waxa uu fursad u haystaa in uu sare u kaco. Qeybta ugu weyn ee badeecadaha dibadda laga keeno ee looga baahan yahay Uzbekistan waa qalabka farsamada, alwaaxyada, wax soo saarka beeraha iyo biraha. Sidoo kale, halkan waxaad si guul leh u iibin kartaa qalab gaar ah, tusaale ahaan, qalabka caafimaadka, iyo sidoo kale adeegyada sida horumarinta software ama factoring (nooc ka mid ah deyn aan la hubin, dhexdhexaadinta maaliyadeed ee u dhexeeya iibiyaha iyo iibsadaha, taas oo u oggolaanaysa shirkadda in ay ka fogaato dhibaatooyinka alaabta. lacagihii dib loo dhigay).
Uzbekistan ma aha xubin ka tirsan ururka EAEU, laakiin waxay ku jirtaa aagga ganacsiga xorta ah ee CIS. Sidaa darteed, ma jiraan wax cashuur ah oo kastam ah Qodobka 2. Codsiga cashuuraha kastamka iyo lacagaha u dhiganta cashuuraha kastamka/Heshiiska aagga ganacsiga xorta ah iyo kharashyada la midka ah ee dhoofinta badeecadaha, sidoo kale waa inaad soo saartaa bayaan.
USA, hogaamiyaha hogaaminaya wadamada wax soo dejinta adduunka oo dhan 2020 / Statista marka la eego soo dejinta. Dawladdu waxay sidoo kale ka soo dhoofisaa alaab badan oo ka timid Ruushka: hadda waddanku waa USA / Xarunta Dhoofinta Ruushka ee kaalinta toddobaad ee qiimeynta dhoofinta tamarta aan tamarta ahayn. Saldhigga iibku wuxuu ka kooban yahay biraha, bacrimiyeyaasha iyo alwaaxyada.
Laakin waxa kale oo aad suuqa Maraykanka la geli kartaa alaabo ka kooban qaybo kale. Tusaale ahaan, dharka, qalabka, alaabta qurxinta ee naqshadeynta asalka ah, xusuusta ama qurxinta dabiiciga ah. Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay inaad xasuusato in ay jiraan iibiyeyaal badan oo ku yaal suuqyada Maraykanka, sidaas darteed waa muhiim inaad daryeesho mid ka mid ah alaabta iyo istaraatiijiyada suuq-geynta saxda ah. Marka lagu daro qaybaha gaarka ah ama xalalka naqshadeynta, faa'iidada alaabta ka timid Ruushka waxay noqon doontaa sicirka sarrifka ruble ee wanaagsan iyo qiimo wanaagsan oo iibsadaha Maraykanka ah.
Ka saddexaad ee adduunka iyo soo dejinta ugu weyn ee alaabta Yurub. Marka la eego qiimeynta dhoofinta Ruushka, Jarmalka / Xarunta Dhoofinta Ruushka ayaa ku jirta kaalinta seddexaad, iyo kuwa ugu sarreeya dhoofinta tamarta aan kheyraadka ahayn, sagaalaad. Jarmalku waxa uu soo iibsadaa alaabta ceeriin, alaabta dhammaatay, qaybaha baabuurta iyo qalabka dibadda.
Ganacsiyada yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee Ruushka ee Jarmalka waxay sidoo kale kor u qaadi karaan alaabadooda. Halkan mar kale, waxaa muhiim ah in ay yihiin kuwo tayo sare leh oo aan ku badneyn suuqa gudaha. Waxaad ku soo bandhigi kartaa dukaankaaga internetka ama suuqyada, tusaale ahaan, Amazon, Etsy ama Wildberries.
Cuntada sidoo kale waa ikhtiyaar wanaagsan oo loo dhoofiyo Jarmalka: waddanku wuxuu leeyahay qurbo-joog weyn oo Ruush ah. Waxa laga yaabaa in ay xiiseeyaan cabitaannada iyo cuntada ay yaqaaniin ilaa carruurnimada kuwaas oo aan si fudud looga heli Yurub, pickles, labeen dhanaan, kvass. Si aad cuntada ugu dhoofiso Jarmalka, waxaad u baahan tahay inaad haysato Midowga Yurub. Dukumentiyada goobta daawada xoolaha / Rosselkhoznadzor tiro ka mid ah daraasadaha alaabta iyo habka ugu taxadar badan ee ururinta iyo buuxinta dukumentiyada.
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, Waxaan rabaa in aan dibadda ku iibiyo! 6 waddan oo ganacsi faa'iido leh!